I-China Ithuluzi Lesikhwama Abahlinzeki - Isitolo esidayisa yonke impahla kanye Thenga Isaphulelo Ithuluzi Isikhwama - Dongguan Zhihao Isikhwama Imboni Co., Ltd.
Ikhaya >Imikhiqizo >Isikhwama sethuluzi
Isikhwama sethuluzi esingenamanzi
(1) Uma uthole ithuluzi elifanele kakhulu, ungakwazi ukweqa le ngxenye, vele u-ode isikhwama osithandayo futhi ujabulele isikhwama sethuluzi esisha esingangenwa ngamanzi. Kodwa-ke, uma namanje ungazi ukuthi ukhethe muphi, khona-ke ngizokunikeza amathiphu wokukusiza wenze isinqumo. Ngaphambi kokuthenga isikhwama sethuluzi esingenawo amanzi, udinga ukucabanga ngezinto ezithile. (2) Ukwakhiwa: Into yokuqala okudingeka uyihlole ukuthi ngabe isikhwama sethuluzi asinamanzi yini. Kodwa-ke, zonke izikhwama esizibalile zinesisekelo esingangenwa ngamanzi, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngakho. Enye into okudingeka uyicabangele ukwakheka kwesikhwama. Udinga isikhwama esingawi noma sigobe. Isizathu salokhu ukuthi uma usebenza endaweni enomswakama, ithuba lesikhwama eligcwala ithuluzi liphezulu. Isiz......
Isikhwama sethuluzi lasendlini
(1) Uma uthole ithuluzi elifanele kakhulu, ungakwazi ukweqa le ngxenye, vele u-ode isikhwama osithandayo futhi ujabulele isikhwama samathuluzi esisha esisha. Kodwa-ke, uma namanje ungazi ukuthi ukhethe muphi, khona-ke ngizokunikeza amathiphu wokukusiza wenze isinqumo. Ngaphambi kokuthenga isikhwama samathuluzi asekhaya, udinga ukubheka ezinye izinto. (2) Idizayini yokuvula: vula umlomo wakho, vula umlomo wakho, noma kunjalo, lokhu kubaluleke kakhulu. Izikhwama eziningi zamathuluzi zinayo. Njengoba ukwazi ukubona, wonke amathuluzi ohlwini lwethu lwezikhwama zamathuluzi ezihamba phambili anazo. Lokho kungenxa yokuthi kukuvumela ukuthi ugcine amathuluzi amaningi, ngiwasebenzisela amathuluzi kagesi kuphela, kepha futhi ungawasebenzisela amathuluzi amancane. Isikhala esivulekile sizogcina namat......
Isikhwama sethuluzi seBelt